January 23, 2022 - ApannPyay Media
သင့်အတွက် ဘယ် ဆင်းကတ်ကိုသုံးရတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုိတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
January 23, 2022 by ApannPyay Media
သင့်အတွက် ဘယ် ဆင်းကတ်ကိုသုံးရတာအကောင်းဆုံးလဲဆိုိတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေ များများစားစား သိပ်မရှိပါဘူး။ MPT ၊ Ooredoo ၊ Telenor ၊ Mytel ဆိုပြီး (၄) ခုထဲ ရှိတာပါ။ များသော အားဖြင့် ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ဆင်းကတ် (၂)ကတ်ပဲ စိုက်လို့ရတာကြောင့် အဲဒီ (၄)မျိုးထဲကမှ (၂)မျိုးကို ပြန်ရွေးပြီး သုံးရတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ အော်ပရေတာ ကို ရွေးပြီး သုံးရတာပေါ့လေ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာက အင်တာနက်လိုင်းလည်းကောင်းရမယ်၊ ဖုန်းဘေလ်ဖြတ်တာလည်း သက်သာရမယ် စတာတွေပေါ် အခြေခံပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ။ ဘယ်လို Mobile Phone Plan တွေက … Read more
ယောက်ျားလေးတိုင်း သိထားဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတွေအပေါ် မလုပ်သင့်သော အချက် ၁၄ ချက်
ယောက်ျားလေးတိုင်း သိထားဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတွေအပေါ် မလုပ်သင့်သော အချက် (၁၄) ချက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတွေအပေါ် မလုပ်သင့်သော ၁၄ ချက်… ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးကို မွေးပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းမလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာဟာ မိန်းကလေးတွေသာ သိပြီး ယောကျင်္ားဖြစ်သူက မသိတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာလည်း မိခင်လောင်း မိန်းကလေး အနေနဲ့လည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မသိထားရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မူတွေ လွဲပြီး ပြသာနာတွေနဲ့ ကြုံရမှာ အမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် မဖြစ်သင့်တဲ့ ပြသာနာတွေကို ကြိုတင်ပြီး သိအောင် မလုပ်သင့်သော အချက်လေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၀၁. တစ်လိပ်လောက် သောက်လိုက်ဦးမယ်။ ဆေးလိပ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးရဲ့ဘေးမှာ မသောက်သင့်ပါ။ … Read more
မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ တောက်တဲ့ လိုမျိုး မိတ်ဆွေစစ်ကို သေတဲ့အထိ တန်ဖိုးထားပါ ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်…အိမ်များမှာအများအားဖြင့်သစ်သားနံရံပါးနှစ်ခုကို အလယ်တွင်နေရာလွတ်လေးထားပိတ်ပြီး နံရံထူတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်တတ်ကြသည်။ တစ်နေ့ အိမ်ပြင်ရန် နံရံကိုဖွင့်ဖျက်လိုက်သောအခါ တောက်တဲ့လေးတစ်ကောင်အတွင်းပိုင်း၌ တွယ်ကပ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ ။အပြင်မှရိုက်သောသံတစ်ချောင်းသည်ထိုအကောင်ငယ်လေး၏ ခြေတစ်ဖက်ကို ထိုးစိုက်ဝင်နေလျက်သားတွေ့လိုက်ရသည်။သူဒီမြင်ကွင်းလေးကိုမြင်တော့ အတော်လေးသနားသွားသည် ။ထို့နောက် သံမှိုကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်ရှု လိုက်သောအခါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ခန့်အချိန် ဤအိမ်ကိုစတင် တည်ဆောက်စဉ်ကတည်း ရိုက်ထားသောသံမှိုဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ပို၍ အံ့သြမှင်သက်သွားမိ၏ ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် ။ဒီတောက်တဲ့လေးက နေရာမရွေ့နိုင်ပဲ (၅)နှစ်လောက်အသက်ရှင်နေတာအိုး…ဒီမှောင်မည်းနေတဲ့ နံရံလွတ်ကြားထဲခြေတစ်ဖက်သံရိုက်ခံထားရလို့ ဘယ်မှမသွားနိုင်တော့ပါပဲ…(၅)နှစ်တောင်အသက်ရှင်နေသေးတာ ..ဟာ! မဖြစ်နိုင်တာပဲ ဘာလုပ်နေခဲ့တာလဲ ?ဘယ်ကဘယ်လို အစာစားပြီး အသက်ရှင်နေခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့စဉ်းစားတွေးကြည့်လို့ မရတောသည့်အဆုံးအံ့သြလွန်းကာ အလုပ်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတောက်တဲ့လေးကိုသာ စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ ဒီလိုနဲ့ နံရံကို နဂိုအတိုင်းလေး ပုံမပျက်အတွင်းကိုသူမြင်နိုင်ယုံဟကာ ပြန်ကပ်လိုက်ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ အသာထိုင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်၏တော်တော်လေးကြာတော့ အခြားတောက်တဲ့တစ်ကောင်သည် ပါးစပ်နှင့်အစာအချိူ့့ကိုကိုက်ချီပြီးရောက်လာသည် … Read more
ခံတွင်​းကို DETOX လုပ်​ခြင်​း ခံတွင်းနံ့ဆိုးသူများ မှတ်သားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတပါနော်
ခံတွင်​းကို DETOX လုပ်​ခြင်​း ခံတွင်းနံ့ဆိုးသူများ မှတ်သားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတပါနော် SEDONA ဟိုတယ်​မှာ အလုပ်​လုပ်​ခဲ့ဖူးတဲ့ ဝန်​ထမ်​းအမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​။ သူဟာနိုင်​ငံခြားသား​တွေနဲ့ အလုပ်​လုပ်​ရတဲ့အတွက် ​နိုင်​ငံစုံကလာ​ရောက်​အလုပ်​လုပ်​ကြတဲ့သူ​တွေနဲ့ ခင်​မင်​ပါတယ်​။ တစ်​​နေ့မှ ာနိုင်​ငံခြားသားလူဖြူတစ်​​ယောက်​နဲ့ ထမင်​းအတူစားရင်​း နိုင်​ငံခြားသားကသူ့မိသားစုအ​ကြောင်​း​မေးပါတယ်​။ သူ့အ​မေအ​ကြောင်​း​မေး​တော့ ဆုံးသွားပါပြီလို့ ​ဖြေလိုက်​ပါတယ်​။ ဘယ်​အရွယ်​မှာဆုံးတာလည်​းဆို​တော့ အသက်​၅၆နှစ်​လို့ သူကပြန်​​ဖြေပါတယ်​။ နိုင်​ငံခြားသားက ချက်​ချင်​းပြန်​​မေးပါတယ်​။ မင်​းအ​မေက သွား​တွေမ​ကောင်​းဘူး မဟုတ်​လားတဲ့။ ရုတ်​တရက်​​မေးလိုက်​တဲ့ ​မေးခွန်​း​ကြောင်​့ သူ​တော်​​တော်​အံ့သြသွားပါတယ်​။ ဟုတ်​ပါတယ်​ သူ့အ​မေဟာ သွား​တွေမ​ကောင်​းပါဘူး။ သွားဖုံး​တွေလည်​း ပျက်​စီး​နေပြီး ခံတွင်​းက ​တော်​​တော်​နံတယ်​ဆိုတာကို သူပြန်​အမှတ်​ရ​နေပါတယ်​။ ခံတွင်​းက အပုပ်​​တွေဟာ ဝမ်​းတွင်​းကိုဝင်​​ရောက်​ပြီး​နောက်​ အင်္ဂါအသီးသီးမှာ ခို​အောင်​းပြီး​ရောဂါဖြစ်​​အောင်​ပြုလုပ်​ကြပါတယ်​။ သူ့အ​မေဟာ အသက်​၅၆နှစ်​​လောက်​နဲ့ ရင်​သားကင်​ဆာဖြစ်​ပြီး ကွယ်​လွန်​သွားရရှာတာပါ။ ဟိုးတုန်​းကမြန်​မာပြည်​မှာ မြန်​မာဆရာဝန်​​တွေမရှိခင်​က နိုင်​ငံခြားသားဆရာဝန်​​တွေကိုသာအားကိုးကြရပါတယ်​။ အများဆုံးက အိန္ဒိယနိုင်​ငံက … Read more
မတော်တဆ မှားယွင်းတီထွင်မိလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အစားအစာ (၇) ခု
မတော်တဆ မှားယွင်းတီထွင်မိလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အစားအစာ (၇) ခု အခုတစ်ခေါက် ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ မတော်တဆ မှားယွင်းတီထွင်မိလိုက်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အမှားပေါင်းမျိုးစုံကျုးလွန်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီထဲက အခုအမှားတွေကတော့ အမှားကောင်းတွေလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိခဲ့ဘဲ ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိမထိုက်ဘဲ အဲဒီအမှားတွေကနေ အလွန် အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်လာစေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအစားအစာတွေက ဘယ်လိုအမှားအယွင်းတွေကနေ ဖြစ်လာခဲ့သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁) ရေခဲချောင်း (Frank Epperson) ရေခဲချောင်းတွေက အခုအချိန်မှာတော့ အရသာပေါင်းစုံနဲ့အချိန်မရွေး ထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီး လူတိုင်း အလွယ်တကူ ဝယ်ယူစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီရေခဲချောင်းတွေကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူကတော့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ ဖရန့်ခ် အက်ပါဆန်ဖြစ်ပြီး … Read more
သီးပင်စားပင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဓါတ်မြေသြဇာ ကြက်သွန်နီအခွံ ဆေးရည်
သီးပင်စားပင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဓါတ်မြေသြဇာ ကြက်သွန်နီအခွံ ဆေးရည် သီးပင်စားပင်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝ ဓါတ်မြေသြဇာ ကြက်သွန်နီအခွံ ဆေးရည်.. ယခုနောက်ပိုင်းမှာ အားလုံးကဓာတုပစ္စည်းရဲ့ အန္တရာယ်ကိုသိလာကြတဲ့အပြင် ကြီးမြင့်လှသည့် ဓာတ်မြေဩဇာကုန်စျေးနှုန်းကို လျော့ချနိုင်ဖို့ရန်အတွက် ကြက်သွန်နီခွံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ သဘာဝမြေဩဇာလေးကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ကြက်သွန်နီခွံက အိမ်တိုင်းရဲ့ မီးဖိုချောင်မှာမရှိမဖြစ်တဲ့ စားသုံးကုန်မှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အိမ်တိုင်းအလွယ်တစ်ကူ ပြုလုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ အခွံမှာ ကယ်လစီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ အိုင်ရွန်း၊ ကော့ပါး စတဲ့ အပင်အတွက် လိုအပ်တဲ့အဟာရဓါတ်များစွာ ပါဝင်တဲ့အပြင် ကြက်သွန်နီ အခွံအနံ့ကြောင့် ပိုးတွေကိုလည်း မလာအောင် တားဆီးပေးစေပါတယ်။ ကြက်သွန်နီအခွံ ဆေးရည် ပြုလုပ်နည်းကတော့.. ကြက်သွန်နီ အခွံခြောက် ၅ ကျပ်သားနဲ့ ရေ ၁ လီတာကို ဘူးလွတ်တစ်ခုထဲ … Read more
သတိထားဆင်ခြင်စရာ လျှပ်စစ်အပူပေး ရေနွေးအိုး ဓါတ်လိုက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း
သတိထားဆင်ခြင်စရာ လျှပ်စစ်အပူပေး ရေနွေးအိုး ဓါတ်လိုက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း သတိထားဆင်ခြင်စရာ လျှပ်စစ်အပူပေး ရေနွေးအိုး ဓါတ်လိုက်ရခြင်း အကြောင်းအရင်း.. သတိထားဆင်ခြင်စရာပါ.. အိမ်က ရေချိူးခန်းသုံး ရေပူစက်က ဓာတ်လိုက်နေပါသည်။ နှစ်ယောက်ဓာတ်လိုက်အပြီး အပြင်ဆရာ ခေါ်ရပါတော့သည်။ ရေနွေးအိုးထဲက ရေတွေမှတဆင့် ပိုက်ကထွက်လာသော ရေမှသည် ချိုးရေကန်ထဲအထိဓာတ်လိုက်ပါသည်။ အိုးအတွင်း အပူပေးသည့်ကွိုင်မှာ ရေဂျိုးစွဲ၍ ပေါက်နေပါပြီ။ ၁၂ နှစ်ကြာသုံးခဲ့ပြီး အခုမှတခါ ပြင်ရခြင်းဖြစ်ပြီး အိုးဖင်ရှိအပေါက်မှတဆင့် ကွိုင်ကို ဖြုတ်ရပါသည်။ အိုးတွင်းမှ ထုံးဂျိုးများ အနည်များမှာ မြင်မကောင်းအောင် ထွက်ကျလာပါတော့သည်။ ကလေးလက်သီးဆုပ်လောက် ထုံးခဲက ၄ ခုလောက် ပါပါသည်။ ကျနော်တို့ မန္တလေးမှာ အများသုံးကြတဲ့ ရေပေးရေးက ရေများမှာ ထုံးဓာတ်များပါသည်။ ရေနွေးတည်သည့် ရေနွေးအိုးများ ထုံးဂျိူးတွေထူနေတာ မြင်ဘူးကြပါလိမ့်မည်။ ရေချိုးရင်း … Read more
ဟင်းတခွက်တည်းနဲ့ ထမင်းမြိန်စေမယ့် သီးစုံဘဲဥ ငါးခြောက်ရိုးဟင်း ချက်နည်း
ဟင်းတခွက်တည်းနဲ့ ထမင်းမြိန်စေမယ့် သီးစုံဘဲဥ ငါးခြောက်ရိုးဟင်း ချက်နည်း ဟင်းတခွက်တည်းနဲ့ ထမင်းမြိန်စေမယ့် သီးစုံဘဲဥ ငါးခြောက်ရိုးဟင်း ချက်နည်း.. ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့.. ဘဲဥ ၆ လုံး၊ အသားထူငါးခြောက်ရိုး ၁၅ ကျပ်သားခန့်၊ အာလူးအရွယ်တော် ၄ လုံး၊ ခရမ်းသီးအရွယ်တော် ၂ လုံး၊ ရုံးပတီသီး ၈ တောင့်၊ ဆီ ၁၀ ကျပ်သားခန့်၊ ကြက်သွန်နီကြီးကြီး ၁လုံး နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ ဥကြီး ၄ မွှာ တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ကျည်သီးမှည့် ကွမ်းသီးလုံးခန့်၊ ငံပြာရည် ဟင်းခပ်ဇွန်းကြီး ၁ ဇွန်းလျော့လျော့၊ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် လက်ဖက်ဇွန်း ၁ ဇွန်းခွဲ၊ နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်၊ မဆလာမွှေး အနည်းငယ်၊ အချိုမှုန့် ဆား လိုအပ်သလို … Read more
ယခုကာလကြီးမှာ အမျိုးသမီးများ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ် ၁၂ ခု (လုပ်မိနေရင် ချက်ချင်း ရပ်ပစ်လိုက်ပါ)
ယခုကာလကြီးမှာ အမျိုးသမီးများ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ် (၁၂) ခု (လုပ်မိနေရင် ချက်ချင်း ရပ်ပစ်လိုက်ပါ) သတိ- အမျိုးသမီးများ ဖတ်ရန်။ အနာဂတ်မှာ အခက်အခဲ မတွေ့ချင်ရင် အောက်ပါအလုပ်များ မလုပ်ရန် သတိပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ နေ့တိုင်း ဝင်ငွေမရှိပဲ စုမဲ များစုခြင်း။ ၂။ ထီအမျိုးမျိုး ထိုးခြင်း။ ၃။ အတိုးမက်ပြီး ငွေချေးခြင်း။ ၄။ အားနာပြီး ငွေချေးခြင်း။ ၅။ မျက်နှာရမလားလို့ ကြားဝင် အာမခံခြင်း။ ၆။ သူများအထင်ကြီးအောင် မရှိကို အရှိဟန်ဆောင်လုပ်ပြခြင်း။ ၇။ သူများကို အထင်ကြီးပြီး လုပ်ငန်းနားမလည်ပဲ ရှယ်ယာထည့်ခြင်း။ ၈။ လုပ်ငန်းနားမလည်ပဲ သူများအကြံပေးသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ခြင်း။ ၉။ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ပဲ တိုးချဲ့ခြင်း။ ၁၀။ လင်နှင့် … Read more
ရောင်းကောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေ သိဖို့လိုပါမယ် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ သတိထားပြီး ပြင်ဆင်ရမယ့် ဈေးရောင်းနည်း ၇ ချက်….. တော်တော်များများလည်း သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်… အခြားလူ တွေဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါ ဆိုင်ခွဲတွေ တစ်ဆိုင်ပြီးတစ်ဆိုင် ထပ်ထပ်ဖွင့်ကြတယ်….မြန်မာတွေဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါ အရင်းပြုတ်ပြုတ်သွားကြတယ်…ဘာတွေ ကွာခြားနေလို့လည်းဆို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ… ၁။ အလုပ်ချိန်တိကျတယ်။ ဆိုင်ပိတ်ချိန် တစ်ခါတစ်ရံမှသာ နောက်ကျတတ်ပြီး နယ်အော်ဒါများတဲ့အခါ ဒီနေ့ဝင်တဲ့အော်ဒါ ဒီနေ့အပြီး ထုတ်တယ်။ နောက်နေ့ကူးရင် နောက်နေ့အော်ဒါတွေအတွက် အဆင်ပြေပြေလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သူဌေးအလုပ်က ဆိုင်ရဲ့ ပစ္စည်းအဝင် အထွက် ပစ္စည်းအားလုံး ခေါင်းထဲမှာ ရှိတယ်။ ဆိုင်သမားရဲ့အသက်က ပစ္စည်းရှိရမယ်။ စစ်သားရဲ့အသက်က ကျည်ဆံရှိရမယ်လို့ ဆိုရိုးရှိတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဆိုင်မှာ ပစ္စည်းမပြတ်စေဖို့ နဲ့ ပစ္စည်းစုံစုံလင်လင်ရှိဖို့ အာရုံစိုက်တယ်။ ၃။ သူဌေးက အစ အလုပ်သမား အဆုံး … Read more